माग्ने बुढा भन्छन्, हाम्रो देशमा एटिएम बाट पानि निस्किन्छ, मेलम्चीबाट पैसा!, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
डिसी नेपाल , २२ फाल्गुन २०७५
काठमाडौं । हाँस्यकलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाले सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्यङ्ग्य गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सक्रियतामा ललितपुर महानगरपालिकाको प्राङ्गणमा नेपालमै पहिलो पटक वाटर एटीएमको उद्घाटन गरिएको थियो।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले वाटर एटीएमको उद्घाटन गरेकी थिइन्। बर्षौ भइसक्दा समेत मेलम्चिको पानी आउँन नसकेको तर्फ व्यंग्य गर्दै माग्नेबुढाले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन्।
हामि यस्तो देशका नागरिक हौँ ,जुन देशमा एटिएम बाट पानि निस्किन्छ। मेलम्चीबाट पैसा निस्किन्छ।
नेपालमा वाटर एटीएम मेसिन प्रविधि पहिलो पटक भित्र्याइएको हो। पहिलो पटक शुभारम्भ गरिएको वाटर एटीएम मेसिन काठमाडौं उपत्यकाका बीस ठाउँमा जडान गर्दै लगिने बोर्डले जनाएको छ।
उद्घाटन पछि कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले बाटोमा हिंड्ने बटुवाको प्यास मेटाउने कार्यमा वाटर एटीएम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेकि थिइन्। उनले पिउने पानीको गुणस्तरलाई सधैं ध्यान दिई कहीँ कतै चुक्न नदिन बोर्डलाई निर्देशन समेत दिइन। उनले भनिन्, “हामीले किनेर खाने बोतलको पानी कहिले काँही त्यसै फालिरहेका हुन्छौं । जति चाहिने हो त्यति पानी पिउनका लागि वाटर एटीएम एकदमै उपयोगी छ। धेरै प्यासीहरुको प्यास मेटाउन वाटर एटीएम सफल हुनेछ।”
वाटर एटीएमलाई नेपालीमा पँधेरो नामाकरण गरिएको छ । उक्त एटीएमबाट २ सय मिलि लिटर र एक लिटर पानी झारेर पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ।
२ सय मिलिलिटर पानीको मूल्य दुई रुपैंया र एक लिटर पानीको मूल्य १० रुपैंया राखिएको छ। उक्त एटीएममा दुई रुपैंयाको क्वाईन हालेपछि पानी झर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने छुट्टै एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर पनि पानी पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ।
बोर्डले सुपिङ ईन्टरनेशनल कम्पनीसँग सहकार्य गरेर यस्तो प्रविधि भित्र्याएको हो। वाटर एटिएम मेसिन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बोर्ड, महानगरपालिका र सुपिङ कम्पनीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भएको छ।